ရီချင်ရင်…ဖတ်လိုက်နော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရီချင်ရင်…ဖတ်လိုက်နော်
Posted by thit min on Sep 23, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle |9comments
အဲဒါနဲ့ဒေါပွနေတဲ့သဌေးက၂၀တန်ငါးရွက် (ဒေါ်လာ၁၀၀) ထုတ်ပေးလိုက်ပြီး “မင်းထွက်သွား နောက်ဘယ်တော့မှမလာနဲ့တော့”လို့ပြောလိုက်တယ်။
မန်နေဂျာ ဖြေလိုက်တာက “သူက ပစ္စည်းလာပို့တဲ့ကောင်လေးပါဆရာ” တဲ့ဗျား။
“ဟေ့ စားပွဲထိုး ငါဘယ်လောက်ထပ်စောင့်ရအုန်းမှာလဲကွ” လို့ဒေါသတကြီးအော်မေးလိုက်တယ်။
“ဟေ ဒါဆို ငါပြန်ရင်ကောင်းမလား၊သူ အခု ဘယ်မှာလဲ”
“အေးအေးဆေးပါ၊ သူကပြောတယ်၊ သူကရှင်နဲ့ မြို့ထဲမှာအခုအတူရှိနေပြီး၊ ပိုကာဒေါင်းနေလို့ဒီညပြန်မအိပ်ဘူးဆိုပဲ”
လိမ္မော်ရည်အမှုန့်(powdered orange juice)တဲ့၊ရေထဲ့ရုံပဲလိမ္မော်ရည်ဖြစ်ကရော။
“မင်းနဲ့တွဲ က လိုက် တိုင်း မြူးဇဇ်ကအချိန်တိုလွန်းတယ်ကွာ၊ခဏလေးခဏလေးနဲ့ပြီးပြီးသွားတယ်ကွာ၊ဘာဖြစ်တာလဲ”
“တိုမှာပေါ့၊အဲဒီမြူးဇဇ်ကိုတီးနေတဲ့မြူးဇဇ်ရှင်က ကျမရီးစားလေ” ပါတဲ့။
ဗိုလ်ကြီး။ ။ဟေ့ တပ်ကြပ် စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့ကွာ၊ ရန်သူရုတ်တရက်တက်လာပီဆိုပါတော့၊မင်းဘာလုပ်မလဲ?
အမျိုးသားတစ်ယောက် သူ.မိန်းမ ပျောက်သွားသဖြင့်ရဲစခန်းသို.သွား ၍ အမူဖွင့်စဉ်
အမျိုးသား – ကျွန်တော့မိန်းမ ပျောက်သွားလို.ပါ။
ရဲ – သူမ အရပ်ဘယ်လောက်မြင့်လဲ။
အမျိုးသား – သတိမထားမိဘူး။
ရဲ – ၀လား ပိန်လား၊ ကျန်းမာရေးကောင်း သလား။
အမျိုးသား – သိပ်တော့ မပိန်ဘူး၊ ကျန်းမာမယ်ထင်တယ်။
ရဲ – မျက်လုံးက ဘာအရောင်လဲ။
အမျိုးသား – ကောင်းကောင်းကြီး သတိမထားမိဘူး။
ရဲ – ဆံပင် အရောင်ကကော။
အမျိုးသား – ခေတ်လိုက်ပြီး ပြောင်းနေတယ်။
ရဲ – သူမ ဘာဝတ်ထားလဲ။
အမျိုးသား – အတိအကျ မမှတ်မိဘူး။
ရဲ – သူမနဲ.အတူ ဘယ်သူပါသွားသေးလဲ။
အမျိုးသား – ကျွန်တော့ အရမ်းချစ်တဲ့ Labrador ခွေးလေးပါသွားတယ်။ သူ.ကို
ရွှေချိန်းကြိုး လေး တပ်ပေးထားတာ၊ အမြင့် က ၃၀ လက်မလောက်ရှိတယ်။
ကျန်းမာတယ်၊ မျက်လုံးအပြာရောင်၊ အညိုရောင် အမွှေးနဲ.၊ နောက်ပြီး သူ.ဘယ်ဘက်
လက်ရဲ. လက်မမှာ လက်သည်းက နည်းနည်း ကျိုးနေတာ၊ သူက လူတွေကို လုံးဝ
မဟောင်ဘူး၊ သူက အသီးအရွက်မကြိုက်ဘူး၊ သူနဲ. အတူစား၊ အတူသွား၊ အတူအိပ်၊
အတူ ဆော့ ခဲ့ ကြတာ ဗျ။
ဟုပြောကာ စတင်ငိုကြွေးပါတော့သည်။ ထိုအခါရဲက
ရဲ – အိုကေ။ဒါဆို ခင်ဗျားခွေးကို အရင်ရှာကြတာပေါ့။
Source: Reader’s Digest Best Jokes (10 July 2010~23 Sept 2011)
ရယ်ရပါတယ်။ တစ်ပုဒ် ကူမယ်နော်။ လက်တွေ့ ဘဝထဲက။
ကိုယ်တို့ မူလတန်းတုန်းက သရေခေတ္တရာ မှော်ဇာ အလကကျောင်းမှာ။ ဆရာကြီး(ဦးဘရွှေတဲ့။ ဆုံးသွားရှာပါပြီ)
နံနက် Assembly မှာ မိန့်ခွန်းပြောတော့ ကလေးတွေ ဆိုးပြီးပြောဆိုဆုံးမရတာ ခက်တော့ စိတ်တိုရှာတယ်
ထင်ပါရဲ့ ၊ မင်းတို့ နောင်ဆိုရင် ဒီ အပြစ်မျိုးတွေ ထပ်ကျူးလွန်ရင် ငါနဲ့တွေ့မယ်။ နားလည်လား၊
ကလေးတွေ ဘာမှ response မလုပ်တော့ ပို စိတ်တိုလာပြီး မင်းတို့ အလကားကောင်တွေ” ခွားတွေ နွေးတွေ”
လို့ အော်ဆူပါလေရော ။ ကလေးတွေရော ဆရာဆရာမတွေရော ပြုံးစိစိ လုပ်လေ ဆရာကြီးပိုစိတ်တိုလေ။
ထပ်ဆူပါရော၊ ဒီတစ်ခါရှေ့ နောက် ပြင်ပြောပါတယ် ” နွေးတွေ ခွားတွေ” တဲ့လေ။
ကျုပ်ငယ်ငယ်က ဖတ်ဘူးတဲ့ ကျုပ်ရဲ့အသည်းစွဲ ကာတွန်းဆရာမောင်ဝဏ္ဏရဲ့ကာတွန်းလေးပါ
သမိန်ပေါသွပ်ကိုများ ကျုပ်ဘရားသားလိုတောင်သဘောထားတယ် :D
ကာတွန်းမှာက ခေတ်ပေါ်လူငယ်တစ်ယောက်က ဂီတဘိုးအေကြီးဆိုတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ ဘေးမှာ တစ်ဂွီဂွီတစ်ဂွမ်ဂွမ်နဲ့ တေးဂီတတစ်ခုကိုဖွင့်ထားတယ်
ဒီတော့ ဂီတဘိုးအေကြီးကမေးတယ် ဒါဘာသံစဉ်တုံး တဲ့
အဲ့သည်တော့ လူငယ်က ဒါ hot music လို့ခေါ်တယ် လို့ပြန်ပြောတော့ ဘိုးအေကြီးက
hot ဆိုတာဘာလဲ လို့ ပြန်မေးလိုက်တော့
hot ဆိုတာ ပူတာ ကြားရတဲ့လူ ရင်ကိုဗလောင်းဆူအောင်ပူစေတဲ့တေးဂီးတလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်
ဒီအခါကြတော့ ဘိုးအေကြီးက မီးသတ်သံချောင်းကြီးကို ခေါက်ပါလေရော
ဘိုးအေကြီးဘာဖြစ်လို့ မီးသတ်သံချောင်းကြီးကိုခေါက်တာလည်း လို့ မေးလိုက်တော့
ဒီကောင်မှ hot တာ
ကြားရတဲ့လူ ရင်ကိုဗလောင်းဆူယုံတင်မဟုတ်ဘူး အထုပ်ပါထမ်းပြေးရတယ်
တစ်နေ့ သူ့တပည့် (၁၀)တန်းကျောင်းသားတွေကို စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆူနေရင်း
ဒီသမီးတွေကိုအားကိုးရမယ်။အခုငါ နဖားကြိုး (၄)ချောင်းရှာထားတယ်။ဘယ်ကောင်တွေက ငါ့သမီးတွေရဲ့
ဒီအချိန်မှာ အတန်းထဲက ယောကျးလေးတွေ အားလုံးတစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းပြောလိုက်တဲ့အသံတွေ
ပို့စ်ထဲကဟာသတွေရော ကွန်မန့်က ဟာသတွေရော အားလုံးမိုက်တယ်ဗျာ။
ဒါမျိုးလေးတွေသာ နေ့တိုင်းဖတ်နေရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။
ညနေဝင်ရီတယောအချိန် ရွာကင်းတဲမှာ ရွာသားတဦး စောင့်နေတုန်း လူရိပ်မြင်လို့ လှမ်းမေးလိုက်တယ်၊ ဘယ်သူလဲကွပေါ့လေ။ အဲဒီလူက မင်းအဖေကွလို့ အသံမာမာ ပြန်ဖြေတယ်။ ရွာသားလည်း ဒေါသထွက်ပြီး ရွာစည်းရိုးတံခါးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အဖေ တကယ်ဖြစ်နေတယ်။
ရီချင်နေလို့ဝင် ဖတ်ပါတယ် ။ တကယ်ပဲ..ရီလိုက်ရလို့ရေးတဲ့ကိုသစ်မင်းကို သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ့
အမရာကတော့…. “စိတ်ကူးယဉ်ဆိုတော့လည်း”၊ “မစောင့်ရတော့ပါဘူး” နဲ့ ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုရဲ့ ဟာသလေးတွေကြိုက်တယ်။ အမရာလည်း သမိန်ပေါသွပ်ကာတွန်းကိုအရမ်းကြိုက်တာ….. “မွေးမေလေ့…..” “ဝူးထွား ဟား…ဟား” ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကို သိပ်သဘောကျတာ ^_^